अशोक दर्जीले पाए नयाँ घर, के-के छन् सुविधा ? - Dainik Nepal
अशोक दर्जीले पाए नयाँ घर, के-के छन् सुविधा ?
दैनिक नेपाल २०७५ भदौ ५ गते १९:०८
काठमाडौं, ५ भदौ । युट्युबबाट एकाएक भाइरल भएका बालक हुन् अशोक दर्जी । बाटोमा गीत गाउँदै गर्दा एक युट्युबरले उनको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरेपछि उनको सर्वत्र खोजी भयो । राम्रो गीत गाउने अशोकको घर राम्रो थिएन । मतलव उनको परिवार टहरोमा बसोबास गर्थे । तर, अहिले तिनै बालकको भाग्य फेरिएको छ । उनको परिवारले नयाँ पक्की घर पाएको छ ।
उनी युट्युबमा हिट भएपछि गायक एवं संगीतकार टंक बुढाथोकीले उनको जिम्मा लिए । उनले एउटा गीत पनि गाउन दिए । ‘मन बिनाको धन ठूलो कि धन बिनाको मन’ बोलको गीत पनि हिट भयो । गीतको भिडियोमा पनि उनी देखिए । तिनै संगीतकार बुढाथोकीको पहलमा अशोक दर्जीको परिवारले परिवारले सोमबार नयाँ पक्की घर पायो ।
सोमबार दमकमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अशोकको बाबुआमालाई घरको साँचो हस्तान्तरण गरियो । अशोकको परिवार सोमबारबाटै नयाँ घरमा बस्न थालिसकेका छन् ।
संगीतकार बुढाथोकीका अनुसार अशोकको घर सुविधायुक्त छ । घरमा फर्निचरको कुनै कमी छैन । उनको घरमा ४३ इन्चको टिभी समेत राखिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । फ्रिज, डाइनिङ टेबल, पलङदेखि भान्सामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री उनको नयाँ घरमा छ । उनको घरमा होम थिएटर समेत रहेको बताइएको छ ।
विभिन्न सहयोगी हातहरुबाट २१ लाख संकलन भएको र त्यही पैसाको बलमा चार कोठे घर निर्माण गरिएको बुढाथोकीले बताए । वरिष्ठ हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यले उनको घरको ताल्चा खोलेका थिए ।